Kyocera Factory | China Kyocera mpanamboatra, mpamatsy
Japon tany am-boalohany nanao an'i Tungalo ...
Endri-javatra ： 1) .Japoney Tungaloy; 2) .Nampidirina karbida tiungaloy dia ho an'ny g ...
Hitachi Original APMT1135PD ...
Original Hitachi APMT1135PDER-HT JP4020 cnc fitaovana ho an'ny fikosoham-bary fanapahana 1.Supply ...
Ny karatra Kyocera mitondra gazy karbida dia mampiditra GMM3020-MT PR930 miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo
Tombontsoa ho an'ny kôkônida Kyocera: Ny vidin'ny fifaninanana Fahombiazana tsara Fandefasana fotoana fohy kalitao azo antoka ny baiko kely ekena Ny safidy fampidiram-bola sy vokatra azo dia mifototra amin'ny fepetra fanapahana isam-batan'olona (mavesatra, tapitra ary vita). Famaritana: 1.Brand: Kyocera 2.Fitaovana: kilasy fanoherana tsara indrindra ary mety amin'ny fanapahana haingam-pandeha haingam-pandeha 3. fonosana: boaty plastika voalohany. 4. Karazan-karazany sy naoty isan-karazany amin'ny safidy. 5. MOQ: tapa-10 (boaty 1) Hafa ...
Kyocera TNGG160404 Carbide azo zahana mampiditra TNGG160404R-S PR930
Endri-javatra an'ny Kyocera Indexable Carbide Inserts: 1.Original Kyocera marika avy any Japon. 2. Kyocera Indexable Carbide Inserts dia mety amin'ny milina vy 3. Kyocera Indexable Carbide Inserts dia manana vokatra marobe amin'ny fanapahana, fikosoham-bary ary fametahana kofehy. 4. Ny fitoniana sy ny filaminana an'ny Kyocera Indexable Carbide Inserts dia mihodina. 5. faritra faritra fampiharana ISIS & ANSI. 6.Manana stock stock of Kyocera Indexable Carbide Inserts ao amin'ny trano fitobiana izahay ary miarahaba ny kaomandinao. Manokana ...
Kyocera TPGH ceramic lathe tips TPGH110304L TN60
Endri-torohevitry ny torohevitra latoc ceramic Kyocera: marika 1.Original Kyocera avy any Japon. 2. Kyocera ceramic lathe lathe tips dia mety amin'ny milina vy 3. Kyocera ceramic lathe lathe dia manana vokatra marobe amin'ny fanapahana, fikosoham-bary ary fametahana kofehy. 4. Ny fitoniana sy ny fiarovana ny toro-làlan'ny seramika Kyocera dia mihodina. 5. faritra faritra fampiharana ISIS & ANSI. 6.Manana tahiry goavam-be latabatra seramika Kyocera ao amin'ny trano fitobiana izahay ary miarahaba ny kaontinao. Famaritana ny latabatra seramika Kyocera ti ...
Mpivarotra tsara indrindra Kyocera karbida cutter dia mampiditra VNGA160404S01525 A66N
Endri-javatra amin'ny sisin-tsoratry ny fanapahana karbida Kyocera: marika 1.Original Kyocera avy any Japon. 2.Kyocera karbida insert inserts dia mety amin'ny milina vy, vy tsy misy fangarony, vy manipy. 3.Kyocera karbida insert inserts dia manana vokatra marobe amin'ny fanapahana, fikosoham-bary ary fametahana. 4.Ny fitoniana sy ny fiarovana ny sisin-tsoratry ny karbida Kyocera dia mihodina. 5. faritra faritra fampiharana ISIS & ANSI. 6.Manana tahiry fampidiran-tsolika karbida Kyocera ao amin'ny trano fitobiana izahay ary miarahaba ny kaomandinao ...
Kyocera Japan WNMG tany am-boalohany nivadika faribolana WNMG080408HQ CA5525
Endri-javatra an'ny Kyocera fihodina: 1.Original Kyocera marika avy any Japon. 2.Kyocera fihodinan'ny piraika dia mety amin'ny fametahana vy 3.Kyocera fihodinam-bolo dia manana vokatra marobe amin'ny fanapahana, fikosoham-bary ary fametahana. 4.Miorina amin'ny famokarana vokatra ny fitoniana sy fiarovana ny kodiarana Kyocera. 5.KYOCERA dia faritra fampiharana ISO O & ANSI. 6.Manana tahiry lehibe miovaova Kyocera ao amin'ny trano fitehirizanay izahay ary mandray ny baikonao. Famaritana ny kodiarana Kyocera: marika marika ： Ky ...
Inona no marika antsy antsy CNC malaza amin'ny taona 2020
Araho izahay amin'ny: